‘राष्ट्रियता र स्वाधिनताको पक्षमा हामी मात्र छौँ’ – ।।दाङ खबर।।
Home / ब्लग/विचार / ‘राष्ट्रियता र स्वाधिनताको पक्षमा हामी मात्र छौँ’
‘राष्ट्रियता र स्वाधिनताको पक्षमा हामी मात्र छौँ’
२०७४, १८ मंसिर सोमबार ११:५५	ब्लग/विचार, मुख्य समाचार
मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधी सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना चुनावि प्रचारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरीरहेको छ ।आफुले निर्माण गरेका विकासे योजनाहरु सहित मतदाताको घरदैलोमा पुगेका छन । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार गणेश प्रसाद आचार्यले आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गरीरहनु भएको छ । यसैविषयमा गणतन्त्र दैनिकले उम्मेदवार आचार्य संघ गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :
मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा होमिनु भएको छ, कस्तो छ तयारी ?
हो, हामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा होमिएका छौ । यतिवेला हामी आम जनता र मतदाताको विचमा हाम्रो पक्षमा मतदान गर्नका लागि अनुरोध गदै घर–दैलोमा पुगेका छौ । जो हिसावले हाम्रो तयारी व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
तपाइ गाउँ–गाउँ र दैलो–दैलोमा पुग्नु भएको छ, चुनावी माहोल बनाउनको लागि । अघिपछि कहिल्यै नजाने ठाउँमा मत माग्न जादा के भन्छन मतदाता ?
तपाईले भने जस्तै हामी गाउँ–गाउँ र दैलो –दैलोमा पुगेका छौ । जहाँ सम्म कहिल्यै नजाने कुरा गर्नुभयो यस्मा सत्यता छैन । हाम्रो पाटी राष्ट्रिय जनमोर्चा निरन्तर जनताको घरदैलो र जनताको समस्या संग साक्षत्कार गर्दै अगाडी बढने गरेको छ । हो तपाईले भने जस्तै सरकार अवसर व्यक्तिगत प्रगतिलाई सवै कुरा ठानेर राजनिती गर्नेहरुका सन्धर्भमा तपाईको कुरा सहि होला ।
जो मतदाता के भन्छन भन्ने प्रश्न छ तपाइको, उहाहरुको ठूलो गुनासो छ । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका मान्छेहरुले हाम्रो समस्यालाई कहिले पनि सुनेनन् । तपाईहरु जस्तो राम्रो विचार बोकेको पार्टी र उम्मेदवार पनि रहेछन, हामी त सधै हजुरको राजनितीमा रुमलिने काम मात्र गरेका रहेछौ । अब हामी कुरा कुट्टदैछौ त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई विजयी गराउछौ भन्नु भएको छ ।
तर पछिल्लो समय राजनिती र नेता प्रति जनताको हार्दिकता र आसा छ कि छैन ?
हेर्नु नेपालको राजनिती मति विकृत भयो कि आसा विश्वास र सम्मान भन्ने केही छैन । यसको कारण भनेको मैले अघि भने जस्तै अवसर र व्यक्तिगत प्राप्तीलाई राजनितीमा जोडने राजनितीमा पाएको नेतृत्वलाई जन सेवा होइन केहि समुह आफन्त र आसे पासेलाइ रिसाउने भन्दा माथि उठन नसक्ने सस्कृती राजनिती स्थापित भएको कारणले तपाइले भने जस्तै राजनिती र नेता प्रति हार्दिकता र आसा हराउदै गएको छ ।
हामीले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौ तर तपाइ गाउँमा जादा त्यहाको समस्याको प्रधान विषय के पाउनु भयो ?
गाउँमा जनताका सामान्य भन्दा सामान्य देखि लिएर ठूला–ठूला सामाजिक समस्याहरु रहेका छन । जनताको घरमा साझ विहानको हात मुख जोर्ने समस्या छ, बच्चाको कापि किताब र फिसको समस्या छ । सामान्य विमारी पर्दा औषधी उपचार गर्न नपाएको समस्या छ । गरिवी र बेरोजगारी को समस्या छ । युवा शक्ति सवै वाहिर र गाउँ घरमा वृद्ध र बच्चाहरुको साहाराको समस्या छ ।
हामीले राजनितीमा ठूला–ठूला परिवर्तन गर्यौ भनेका छौ । जनताको जीवन शैली हनन कस्टकर बन्दै गइरहेको छ । बाटोको समस्या छ , खानेपानीको समस्या छ , हिंसाहरुको समस्या छ । धुलो र धुवाले दैनिक जिवन कस्टकर वनेको छ । मानव स्वास्थ्य विग्रेको छ ।
मतदातले वैचारिक सिद्धान्त भन्दा विकाश र शान्ति खोजी रहेको छ कि छैन ?
हो, मतदाताले खोज्ने भनेको विकाश, शान्ति, समृद्धि र समपन्नता हो । तर त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा खोज्दा तपाइले भने जस्तै वैचारिक राजनिती र सिद्धान्त नै चाहिन्छ । असल समाजको निमार्ण गर्नको लागि त्यही प्रकारको भोजन, विचार र सिद्धान्त चाहिन्छ । त्यो कुरा र्बिसेर विकाश र शान्ति पनि आउदैन यो कुरा भुल्न हुदैन ।
तपाईहरुले अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाको मुद्दाहरु जनता समक्ष कसरी प्रस्ट पारीरहनु भएको छ यो चुनावको मुखमा ?
हामीले जनताले घरदैलीमा जानेबेला हाम्रा राजनितीका मुद्दाहरु बताउने गरेका छौ । हाम्रा घोषणा पत्र प्रतिवद्धता र अपिल मार्फत हाम्रा कुरा आम जनता र मतदाताको घर–घरमा पु¥याएका छौ । गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौ । समुह नेपालको निमार्ण गरौ भो हाम्रो निर्वाचनको मुल नारा हो । यो निर्वाचन पछि माग गणतन्त्र सस्थागत हुने हो तर यसका विषयहरुमा आवाज उठन थालेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रियता ज्यादै कमजोर भएको छ । हामी नेपालीले आफ्नो संविधान आफै वनाउदा हामीले पाएको पारवहन अधिकार माथि हनन गरी नाकाबन्दी समेत सहनु परेको थियो । त्यसैले राष्ट्रियताको रक्षा एउटा महत्वपुर्ण विषय हो । साथै जनतालाइ स्वाधिन स्वाभिमान बनाउनको लागि समृद्ध नेपाल निमाण गर्न जरुरी छ । सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो । हामीले संघियता नेपाल ठिक हुदैन भन्दा भन्दै पनि अरु कसैलाई रिझाउनको लागि संविधानमा संघियता उल्लेख भएको छ यसको खारेजीको कुरा हामीले उठाएका छौ ।
तर खास गरी लामो समय देखि संघियताको विरोध गर्दै आउनु भयो । तर अहिले यहि संघियता सहितको संविधान कार्यावमन गर्न लागि पर्नु भएको छ । कुरा विरोभास छैन र ?
कुरा त्यसो होइन संविधानमा संघियता मात्र छैन । संघियता त संविधान भित्रको एउटा विषय हो । हामी त संविधान सभाबाट संविधान बन्नु पर्छ भनेर धेरै पहिला देखि नै भनेका छौ नी । राजनैतिक स्थीरता को लागि संविधान जारी गर्न र कार्यानवयन गर्न जरुरी छ । त्यसमा मौलिक अधिकार समान्ताको अधिकार न्यायको अधिकार लगायत धेरै अधिकार छन । त्यसो त हामी यो संसदीय व्यवस्तालाई नै स्वीकार गर्दैनौ यो असफल व्यवस्था हो । यसलाइ हामी उपयोग मात्र गरेका छैन ।
त्यसैले चुनावमा जादा वितिकै सवै कुरा स्वीकार भयो भन्ने कुरा होइन । र यसमा विरोद यसि पनि छैन । हामीले निर्वाचन बाट बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संसोधन गरी संघियता खारेज गर्न पनि सन्दौ नी ।
तपाइहरु धेरै कुरामा विरोध मात्र जनाउनु हुन्छ । भनेर टिप्पणी हुन्छ नी ? नयाँ मार्ग दिन सक्नु हुन्न भनिन्छ के हो ?
यो सरासर गलत कुरा हो । हामीले विरोध माग गरेका छैनौ । संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दा नयाजनवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाका कुरा गरेका छैन । सायद यही नै होला मार्ग दिन सकेको भन्ने कुरा ? हामीले संघियता ठिक हुदैन मात्र भनेनौ यसका कारणहरु पेस गरेर प्रजातन्त्रिक विकेन्दिकरण, स्थानिय स्वसासन सहितको एकात्मक राज्यको कुरा गन्यो । केन्द्रिकृत राज्यको अन्त्य गर्ने कुरा गर्यौ । त्यसैले त्यो टिप्पणीम्य सत्यता छैन । गलत विचार बोक्नेहरुले हाम्रो असल विचारको अगाडी लिएर दिएको दिएको अभिव्यक्ति मात्र हो ।
२०७४, १८ मंसिर सोमबार ११:५५
Previous सर्लाहीका दुई स्थानमा बम विष्फोट
Next मुखमा कपडा कोचेर गहगहना लुटियो